ဒီကြေညာချက်နဲ့ ပက်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးရဲ့ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ မစ္စတာ ဂေါင်မင်းဘို (Mr.Gaomingbo) က လက်ပန်းတောင်းတောင်ကြေးနီစီမံကိန်းဟာ တရုတ်နဲ့မြန်မာ ကုမ္ပဏီတွေ အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ စီမံကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်ထားတဲ့အပြင် ရရှိလာတဲ့ အကျိုးအမြတ်တွေကိုလည်း နှစ်ဦးနှစ်ဘက် အညီအမျှခွဲယူဖို့ ဆွေးနွေးထားခဲ့ပါတယ်။ ဒီစီမံကိန်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိတဲ့အတွက် မြန်မာ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ဒီစီမံကိန်း အဆင်ပြေချောမွေ့ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံကထုတ်ပြန်တဲ့ ဥပဒေတွေကို လေးစားလိုက်နာပေးဖို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် လို့ RFA ကို ပြောပါတယ်။
ဒီကြေညာချက်ဟာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မုံရွာ၊လက်ပန်းတောင်း ခရီးစဉ်မပြီးဆုံးခင်မှာ ထုတ်ပြန်လိုက်တာ ဖြစ်ပြီး၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလဲ လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ လက်ပန်းတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း ကို ပြေလည်အောင် ဆောင်ရွက်ချင်တယ်လို့ ပြောကြားထားပါတယ်။
ACCORDING TO BURMESE WE MUST DO TO STOP THIS PLAN OR NOT WE WILL LOST OUR GENERATION
SO WE TRY BEST TO DO A BOUT THAT PLEASE .
Dec 05, 2012 01:16 AM
According to Burmese Histry,Chinese People are notagood friend's for Burma.
-The Chinese destroy the Burmese Dynasty Several time.
-The China Government Support the Burma Communist
and they control the Northern Shan State Kyokok Pangsai area.
-The China Government Control the Burma MILITARY JUNTA( Army Generals).So the Burma Military Leaders
are still working for their Bost China Government.
The China Government Buy Burma,People and the
Land from the Burmese Army Junta Generals.
- The Burma Generals can't stand for the Burmese People,and the Country.
-WHY ? ? ? ? ? ? ? They SOLD OUT the Land,People..etcs,
-ONLY THEY WORK FOR THE CHINESE not for the Burmese.
- The Army Junta Generals are not the Burmese Army
General. THEY ARE CNINA GENERAL AND MONEY GENERALS.
-We need to have the Burmese Army Generals,Who they
LOVE THEIR COUNTRY(BURMA) AND HIS PEOPLE(BURMESE)
TEY MUST BE STAND FOR THEIR PEOPLE AND COUNTRY.
Dec 03, 2012 03:36 PM
refund the chinese and substitute the american.so easy! bye..bye..pauk phaw.
China is acting likeamaster on us with the help of Burmese Junta ,now Burma is very close to become an another Tibet.
Obviously Chinese Masters are very happy to see burning monks not only in Tibet but also in Burma.
Dec 02, 2012 05:19 AM
Bitch,shit to china.
Dec 01, 2012 11:09 PM